နောက်မြေပုံ NextMapping ™ Podcasts
Cheryl Cran နှင့်သူမ guests ည့်သည်များအားလုံးသည် 'အနာဂတ်အလုပ်' နှင့်စကားပြောပြီးသင်၏အဆများစွာအောင်မြင်သောအနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန် NextMapping ™ကိုမည်သို့သုံးရမည်ကိုပြောကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ NextMapping ™ podcasts များကိုစီအီးအို၊ အချက်အလက်သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ လူမှုသိပ္ပံပညာရှင်များ၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်အနာဂတ်အလုပ်အကိုင်မျှော်ကြည့်သူများ၏စကားကိုနားထောင်ပါ။
ခေါင်းဆောင်များနားထောင်ပါ Upwork, Freelancer, BDO နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်အနာဂတ်၏အနာဂတ်အတွက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဝေမျှပါ။
Jess Von Bank နှင့် ယခု အလုပ် Podcast
Cheryl Cran ပါဝင်သည်။ - ကျွန်ုပ်တို့ 2022 သို့ လှမ်းလာသောအခါတွင်၊ 2021 ခုနှစ်တွင် ချန်ထားခဲ့နိုင်သော ခရီးဆောင်အိတ်ကို တွေးတော၍မရနိုင်ပါ။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အပြုသဘောဆောင်သော အသွင်ကူးပြောင်းမှု၊ ပြောင်းလဲမှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတို့ကို တွန်းအားပေးရန်အတွက် နှစ်သစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ဘာဆက်လုပ်နိုင်မည်နည်း။
ဤအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည် - Global News Podcast
Cheryl Cran ပါ ၀ င်သည် - တိုးတက်မြင့်မားသောနည်းပညာများနှင့်အတုထောက်လှမ်းရေးများသည်လုပ်သားအင်အားထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှလက်ရှိနှင့်အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက်အလုပ်အကိုင်လုံခြုံမှုသည်ဘယ်တော့မျှစိုးရိမ်စရာမရှိတော့ပါ။ ယခုအပတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဈေးကွက်စျေးကွက်မည်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်နှင့်အနာဂတ်တွင်အလုပ်သမားများအားအကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်မည်သို့ကူညီရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသည်။
Brad Breininger၊ Zync အေဂျင်စီ အလုပ်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်၏အနာဂတ်အကြောင်း Cheryl Cran ကိုအင်တာဗျူး။
Cheryl နှင့် Brad သည်ရှေ့ဆက်သွားမည့်ပုံနှင့်မည်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်မည်ကိုဆွေးနွေးကြသည်။
iTunes ကိုအပေါ် Download
Cheryl Cran အင်တာဗျူးများ Brad Breininger ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Zync အေဂျင်စီ NextMapping အတွက်™ Podcast တခုကို။
၏ Ross Thornley, ၏ CEO & Co- တည်ထောင်သူနှင့်အတူ AQai - လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်နည်းပြခြင်း.
၂၀၂၀၊ မတ်လအစောပိုင်းတွင် Cheryl သည် Scot နှင့် Holly of the တို့နှင့်အတူထိုင်ခဲ့သည် NRECA coops ၏အနာဂတ်ကိုဆွေးနွေးရန်။
အထူးသဖြင့်နည်းပညာ၏သက်ရောက်မှု၊ မျိုးဆက်သစ်အလုပ်ခွင်အဆိုင်းနှင့်အနာဂတ်တွင် coop ခေါင်းဆောင်များအတွက်အခွင့်အလမ်းများအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
MindValley ၏ဂျေဆန်ကမ့်ဘဲလ် Cheryl Cran နှင့်အလုပ်၏အနာဂတ်နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုအင်တာဗျူးခြင်း။
Cheryl သည်မိမိကိုယ်ကိုခေါင်းဆောင်မှု၊ အနာဂတ်အလုပ်သို့ပြောင်းလဲမှုကို ဦး တည်စေမည့်နည်းလမ်းသစ်နှင့်ကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သောအတွေးအမြင်များကိုထိုးထွင်းသိမြင်သည်။
LogMeIn မှ Marketing ၏ VP Jim Jim Somers ကိုပြသထားသည်
LogMeIn ရှိဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစီးပွားရေးယူနစ်အတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး VP ဂျင်မ် Somers နှင့်ပူးပေါင်းမည့်အနာဂတ်အင်တာဗျူးကိုနားထောင်ပါ
မှာ ၀ ယ်ယူသူအတွေ့အကြုံနည်းပညာ၏အကြီးတန်းဒါရိုက်တာရိုင်ယန်လက်စတာကိုပြသထားသည် LogMeIn. Ryan နှင့် Cheryl တို့က AI၊ bot နှင့်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အလုပ်နှင့်ဘဝ၏အနာဂတ်ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုဆွေးနွေးကြသည်။
Ryan's AI: Real Life Podcast တွင်ကြည့်ပါ ဒီမှာ.
ဒေါက်တာ Rovy Branon၊ ၀ ါရှင်တန်တက္ကသိုလ် ၀ ါရှင်တန်ဒီစီကောလိပ်အတွက်ဒုတိယ Provost ပါ ၀ င်သည်။ ဒေါက်တာ Rovy နှင့် Cheryl တို့သည်အနာဂတ်၏အနာဂတ်ကိုဆွေးနွေးကြသည်။
၏ဘင် Wright, ၏ CEO ဖြစ်ခြင်း အလျင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ. ဘင်နှင့်ရှယ်ရယ်တို့သည်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်သူတို့၏နည်းပညာအားဖြင့်ကမ္ဘာအနှံ့ကျယ်ပြန့်စွာချဲ့ထွင်နိုင်ပုံနှင့်အနာဂတ်အတွက်မည်သို့ပြင်ဆင်မည်ကိုဆွေးနွေးကြသည်။
Amber Mac၊ သမ္မတ၊ AmberMac Media, Inc. Amber နှင့် Cheryl တို့သည်နည်းပညာခေတ်ရေစီးကြောင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းမှု၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်အနာဂတ်၏အနာဂတ်ကိုဆွေးနွေးကြသည်။
Matt Barrie ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Freelancer.com & Escrow.com Matt နှင့် Cheryl အလုပ်၏အနာဂတ်, အလုပ်အကိုင်၏အနာဂတ်နှင့်ဆွေးနွေးရန် အလွတ် ကမ္ဘာပေါ်ရှိပညာရှင်သန်း ၃၀ ကျော်ကိုဆက်သွယ်ပေးသောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအလွတ်ဈေးကွက်ဖြစ်သည်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲ၌တည်၏ သွက်လက်စွာ, Catalant ၏ SVP ၏မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်များနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Rich Gardner သည် NextMapping Cheryl Cran ကိုတည်ထောင်သူ Future of Work ကျွမ်းကျင်သူနှင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Rich နှင့် Cheryl တို့ကခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ပြောင်းလဲမှု၊ ခေါင်းဆောင်မှုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုဆွေးနွေးကြတယ် Cheryl သည်အရေးအကြီးဆုံးသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောအတွေးအခေါ်အပါအ ၀ င်အခြေခံကျကျခေတ်စားသောကမ္ဘာရှိခေါင်းဆောင်များဘာလိုအပ်သည်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။ ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်သူတို့၏အဖွဲ့အစည်းများပြောင်းလဲခြင်းကိုမည်သို့ကူညီနိုင်ကြောင်းနှင့်အနာဂတ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အသင်းများတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်လက်တွေ့ကျသောအကြံဥာဏ်များနှင့်ဥပမာများကိုကြားနာရန်ညှိထားပါ။
မှာဒေါက်တာသောမတ်စ်Ramsøy featuring Neurons, Inc. Cheryl က Dr. Thomas Ramsøyကို ဦး နှောက်လှိုင်းများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊
Liz O'Connor, Daggerwing Group ၏တွဲဖက်ကျောင်းအုပ်ကြီး
Cheryl က Liz O'Connor အား Liz O'Connor နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းသည် Facebook ၏လုပ်ငန်းခွင်ကို ဦး ဆောင်ခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
Cheryl Cran ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည် Michael Alf သူ့အတွက် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှု Podcast အနာဂတ်၏အနာဂတ်နှင့်မည်သို့လုပ်သားများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အနာဂတ်ဖန်တီးနိုင်မည်အကြောင်း။
Hamoon Ekhtiari နှင့် Audacious Futures ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Cheryl Cran အင်တာဗျူးများ ရဲရင့်သောအနာဂတ် စီအီးအို Hamoon Ekhtiari ၏အနာဂတ်အနာဂတ်နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုသည်အနာဂတ်အတွက်အကြောင်းဖြစ်သည်။
Cheryl Cran ကို Dr.Nancy McKay ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းသည်အနာဂတ်အလုပ်၏အနာဂတ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့သည်။
ခရစ်ဘာဘင်၊ Appirio ၏စီအီးအို
Cheryl Cran က Chris ၏အလုပ်၏အနာဂတ်နှင့် Cloud computing ၏အင်တာဗျူးများကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ သူသည်တိမ်တိုက်များ၏အနာဂတ်နှင့်၎င်း၏အနာဂတ်အလုပ်အပေါ်တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဝေမျှပေးသည်။
Sebastian Siseles, Freelancer ၏ဒါရိုက်တာ
UpWork ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Stephane Kasriel
NextMapping Podcasts များကိုစာရင်းသွင်းပါ
အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲနေသောအလုပ်၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးပေါ်နေပါ။